Ungazithenga njani iincwadi kwiGoogle eBookstore yeethebhulethi yeNOOK
Ungayithenga incwadi kwiGoogle eBookstore kwaye uyifunde kwithebhulethi ye-NOOK. Mhlawumbi ufuna ukuqhubeka nokufunda incwadi enye kwi-iPhone yakho njengoko usiya emsebenzini okanye ufunda ngakumbi kwikhompyuter kwidesika yakho. Njengakwivenkile ye-NOOK, iincwadi zibotshelelwe kwiakhawunti yakho- hayi kwisiqwenga esithile okanye uphawu.
Ukuba awukenzi njalo, faka ingxelo yokugqibela ye Iinguqulelo ze-Adobe Digital kwiLaptop yakho okanye kwikhompyuter yakho. Unokuyalelwa ukuba ube nesazisi seAdobe. Ukuba awunayo i-ID yeAdobe, uza kubona ikhonkco kwiscreen ukuyifumana.
Ukusuka kuloo ndawo, nangaliphi na ixesha xa uthenga into online kunye nenkonzo (enje ngeGoogle eBookstore) efuna iiAdobe zedigital Editions, loo nto inxulunyaniswa ne-ID yakho yeAdobe, endaweni yekhompyuter yakho.
Nje ukuba ufake ii-Adobe Digital Editions, nantsi indlela yokuthenga iincwadi kwiGoogle eBookstore kwaye uzithumele kwiThebhulethi yakho ye-NOOK.
Yiya e Google eBookstore .
Vula iakhawunti yasimahla ngoGoogle.
Iithegi ezifanayo zeakhawunti xa usebenzisa ezinye izixhobo zikaGoogle, kubandakanya iGmail.
Imilinganiselo ye-metoprolol tartrate 25mg
Bhatalela iphepha-mvume lokuba nekopi yencwadi leyo.
Ifayile yongezwa kwiakhawunti yakho kaGoogle.
Kuluhlu, khangela incwadi ofuna ukuyithumela kwiThebhulethi ye-NOOK.
Cofa indawo ethi Malunga Nale Ncwadi.
Cofa ufunde kwisixhobo sakho.
Unokubona ingxelo ye-EPUB, inguqulelo yePDF, okanye zombini.
Cofa elinye lamakhonkco ukuhambisa ifayile ye-ACSM kwikhompyuter yakho.
Qiniseka ukuba uyazi apho ifayili igcinwa khona. Ufuna ifayile ukuze uvule incwadi. Ukuba unikwe ukhetho phakathi kwe-EPUB okanye ifomathi yefayile yePDF ye-eBook, yiya ne-EPUB: kusenokwenzeka ukuba ibandakanye uninzi okanye zonke izinto ezikhoyo zethebhulethi ye-NOOK zibandakanya uhlobo olunokuphinda lube nakho, uhlengahlengiso kwiindawo zokubhala, kunye nokunye.
Fumana kwaye ucofe ifayile ye-ACSM kwikhompyuter yakho.
Isenokuba kwifolda yokukhuphela okanye kwidesktop. Ukuba awufumani fayile, khangela * .acsm.
Imiphumo emibi yeoli ye-antibiotic
Olu xwebhu kufuneka luvulwe kwi-Adobe Digital Editions. Ukuba ucofa ifayile ayivuli isoftware ye-Adobe, khangela i-ADE kwikhompyuter yakho kwaye uqalise inkqubo. Emva koko khetha Yongeza into kwilayibrari kwimenyu yeThala leencwadi, kwaye ufumane ifayile ye-ACSM kwikhompyuter yakho.
Ukuba awukho kumbono weThala leencwadi, cofa i icon kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Incwadi oyithengileyo kwiGoogle eBookstore ayibonisi kwi-All Items shelf kwithala lembono.
Vula kwaye uqhagamshele iThebhulethi yakho ye-NOOK kwikhompyuter ngentambo ye-USB ebonelelweyo.
Ungathatha i-tylenol kunye ne-benadryl kunye
I-Adobe Digital Editions kufuneka iqaphele i-NOOK Tablet njengesixhobo esigunyazisiweyo kwaye iyibonise kwicala lasekhohlo lesoftware. Ukuba awuyiboni ithebhulethi yakho ye-NOOK, vala ii-Adobe Digital Editions kwaye uphinde uyivule ngentambo ye-USB endaweni, exhunywe kwiThebhulethi yakho ye-NOOK, ekufanele ukuba ivuliwe.
Cofa uze utsale i-eBook kaGoogle kwisahlulo esisekunene kwi icon ye-NOOK yeThebhulethi kwicala lasekhohlo.
Ukuba awukwazi ukutsala incwadi ukusuka kwithala leencwadi ukuya kwiThebhulethi ye-NOOK, isoftware ye-Adobe ayibonanga ithebhulethi yakho njengesixhobo esigunyazisiweyo. Qhagamshelana nezikrini zoncedo zeAdobe.
Ukuba ufuna ukuqinisekisa ngokudluliselwa, cofa i icon ye-NOOK kwaye ufumane ifayile yencwadi apho.
Khupha i-NOOK Tablet kwikhompyuter yakho ngaphambi kokuba uyikhulule.
Abasebenzisi beWindows banokuya kwi-Explorer ukufumana i-NOOK kunye nememori khadi yayo; cofa ekunene nganye kwaye ukhethe u- Eject. Abasebenzisi beMacintosh baya kufumana ii icon ezifanayo kwithebhulethi kwiFumana.
I-cream ye-permethrin (i-elimite)
i-acetaminophen 325mg phenylephrine hcl 5 mg
Yintoni i-meloxicam 15 mg
siyintoni isono sokufa
iziphumo eziphezulu ze-100mg